Wareysiga lala yeeshay Steven Woods: Luqadda Dijital ah ee jirka | Martech Zone
Wareysiga lala yeeshay Steven Woods: Luqadda Dijital ah ee jirka
Arbacada, Oktoobar 28, 2009 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Shalay galab ayaan ku faraxsanahay inaan sameeyo kii iigu horeeyay Google Podcast Podcast la Steven Woods, CTO ee Eloqua iyo qoraaga Luqadda jirka ee Dijital ah. Google Voice wuxuu kuu ogolaanayaa inaad duubto wicitaanadaada soo gala (riix 4 si aad u bilowdo oo aad u joojiso duubista) ka dibna si toos ah ugu dhejiso sanduuqaaga Google Voice. Waxaan u maleynayay inay tani ahayd hab fiican oo lagu bilaabi karo sameynta codka goobta!
Waan duugaa. Waxaan la kulmay Steven waxaanan fursad u helay inaan fadhiisto guddi isaga la jooga goobta Shirka Suuqgeynta Internetka. Way fiicneyd in laga wada hadlo buugiisa, sida suuq geynku u isbeddelay iyo sida xitaa suuqleydu ay uga beddelayaan hal abuur noocyada shakhsiyadeed ee gorfeyn badan. Ku saabsan wareysiga…
[maqalka: https: //martech.zone/wp-content/uploads/podcast/steve-woods.mp3]
Haddii aadan arkin ciyaaryahanka, dhagsii boostada si aad u dhageysato wareysi lala yeeshay Steven Woods.
Hordhaca ka dambeeya Luqadda Dijital ah ee Jirku waa in suuqleydu ay bilaabaan inay fiirsadaan khadka tooska ah luqadda jirka iibsadayaasha si ay ula xiriiraan iyaga si wax ku ool ah. Tan waxaan ku sameeynaa wadahadal maalin kasta isgaarsiinta waji ka waji ah. Waxaan soo qaadaneynaa luuqad jireed oo jilicsan waxaanan hagaajineynaa sida aan ugu sii wadno inaan ula hadalno qofka. Si kastaba ha noqotee, tan si wax ku ool ah looma dhammaystirin khadka tooska ah. Shirkado badan ayaan indha indheyn sida iibsadayaashu ugu socdaan ama u marayaan websaydhkooda… waxay si fudud u sii wadaan dufcadda iyo qarxinta farriimaha. Waa isbarbardhig weyn!
Waxaan u maleynayay inay tani fursad weyn u noqon laheyd inaan duubo halkii aan ku qori lahaa qoraal ku saabsan wadahadalkeena. Waxaa jira waxyaabo badan oo muhiim ah oo la tirin karo, laakiin Steve wuxuu siiyaa xoogaa bilow wanaagsan oo suuqleyda ah wareysiga.
Tags: luqadda jirka ee dhijitaalka aheloquakaymo steven
Saamaynta korsashada iyo isbeddelka
Oktoobar 28, 2009 at 3:17 PM